चिट चोरेर हैरान पारे पछि शिक्षकले गरे यस्ताे हर्कत, संसारभरी भाइरलसंगै ब्यापक चर्चा – नेपाली सूर्य
चिट चोरेर हैरान पारे पछि शिक्षकले गरे यस्ताे हर्कत, संसारभरी भाइरलसंगै ब्यापक चर्चा
September 9, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on चिट चोरेर हैरान पारे पछि शिक्षकले गरे यस्ताे हर्कत, संसारभरी भाइरलसंगै ब्यापक चर्चा
काठमाडौ । विद्यार्थीले चीट चोर्ने रोग नेपालको प्रमुख समस्या हो । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्र खस्किएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ । बेला–बेलाका परीक्षामा विद्यार्थीले चीट चोरेको चर्चा नेपाल आमसञ्चारमापनि भइरहेको हुन्छ । तर यो समस्या नेपालको मात्र होइन रहेछ । अहिले मेक्सिकोमा विद्यार्थीको चीट विश्वभरी हासोको विषय बनेको छ । हालै ‘हाइस्कुल’का विद्यार्थीको परीक्षामा शिक्षकले विद्यार्थीले चीट चोर्न वा एक अर्कामा हेर्न पाउँन भनेर गरेको हर्कत सबैलाई सोच्न बाध्य पारेको छ । त्यहाँ लगाएको एक अनौठो नियम थाहा पाउने धेरैलाई अचम्भित बनाउँछ ।
हालै प्रशिक्षार्थीहरुले चिट नचोरुन् भनेर एक शिक्षकले उनीहरुको आँखाको दुबै पट्टी ‘कार्डबोर्ड’ लगाइदिएका थिए । तर यस्तो हर्कत गरेकोमा ती शिक्षक ‘सस्पेन्ड’ भएका छन् ।परिक्षामा विद्यार्थीहरुले चिट चोर्ने चलन धेरै भएपछि ती शिक्षकले यस्तो गरेको बताइन्छ । स्थानीय मिडियाका अनुसार मेक्सिकोको तियाक्साला राज्यस्थित यस्तो घटना भएको हो । यस्तो घटना मिडियामा सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थीका अभिभावकले समेत विरोध जनाएका छन् । विद्यार्थीमाथि अन्याय गरिएको उनीहरुको गुनासो छ । शिक्षकलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
घटना बाहिरिएपछि प्रहरीले पनि यसबारे अनुसन्धान गरिने जनाएको छ । यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि यसबारे टिका टिप्पणी भइरहेको छ । अधिकांशले ती शिक्षकमाथि ठट्टा गर्नुका साथै आलोचना गरेका छन् ।
ग्रेट ब्रिटेनकी ५८ वर्षे भ्यालेरी स्यान्डर्स श्रीमानमाथिको आफ्नो व्यवहारका कारण १७ घण्टा जेलमा बिताउन बाध्य भएकी छिन् । भ्यालेरीले श्रीमानलाई आफ्नो कारको साटो घर सफा गर्न बारम्बार कचकच गर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ । भ्यालेरीको समस्या त्यतिबेला सुरु भयो जब सन् २०१८ को अप्रिलमा उनका श्रीमान माइकलको अफिसमा जबसेन्टर युकेका कर्मचारीले नियमित जाँचमा जाँदा उनी खराब मुडमा भएको थाहा पाए । यसबारे उनलाई सोध्दा, उनीहरुले माइकललाई श्रीमतीले जिममा धेरै समय बिताउनु र कार धेरै सफा गर्नुको साटो घर सफा गर्न भनिरहने थाहा पाए । भ्यालेरीको श्रीमानप्रतिको त्यस्तो व्यवहारलाई ‘कन्ट्रोलिङ विहेभियर’ भन्दै यो कानूनी रुपमा दण्डनीय भएको बताए । त्यसपछि पुलिस स्यान्डर्सको घरमा गए, भ्यालेरीलाई पक्राउ गरे र उनलाई १७ घण्टासम्म जेलमा राखे । उनलाई विगत एक वर्षदेखि कानूनी लडाईं लड्न बाध्य पनि बनाइएको छ ।
‘मलाई पुलिस स्टेशन लगियो र जेलमा थुनियो । म यसअघि कहिले पनि समस्यामा परेको थिइनँ त्यसकारण निकै आत्तिएको थिएँ । मलाई आफू अपराधी जस्तो महसुस भइरहेको थियो, ’ भ्यालेरीले भनिन् । पक्राउ पर्दा आफूलाई ठूलै झट्का लागेको उनले बताइन् । ‘मैले श्रीमानलाई भ्याक्युम लगाउन, घर सफा गर्न भन्दै केही नोट लेखेर छोडिदिन्थेँ । घरमा धेरै काम हुन्थे तर उनी आफ्नो कार सफा गर्न चार घण्टा लगाउँथे । त्यसकारण मैले उनलाई यसका लागि कराउँथे पनि । यो पक्कै पनि कन्ट्रोलिङ विहेभियर होइन, यदि त्यस्तो हुँदो हो त प्रत्येक विवाहित अदालतमा हुन्थे ।’
माइकलले द सनसँगको कुरामा भ्यालेरीविरुद्ध मुद्दा चलाउनु आफ्नो निर्णय नभएको बताउँदै उनले आफूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको कुरा स्विकारे । उनले भने, ‘उनले मलाई बारम्बार घर सफा गर्न, भ्याक्युम लगाउन अह्राइरहन्थिन् । उनले मलाई बडिबिल्डिङ र कार सफा गर्न धेरै समय लिने गरेको भनेर पनि कचकच गरिरहन्थिन् । यसले मेरो मुड खराब गर्दथ्यो ।’ ‘हामीबीच माया भन्ने कुरा नै थिएन । उनले आफ्ना दुईवटा कुकुरलाई चुम्बन गर्थिन्, अँगालो हाल्थिन् तर उनले मलाई न त चुम्बन गर्थिन् न अँगालो नै हाल्थिन् । ’
भ्यालेरीले आफ्ना ५८ वर्षीया श्रीमान्ले जबदेखि जिम म्यानेजरको काम सम्हाले तबदेखि उनले आफ्नो धेरैजसो समय वर्कआउट र डाइटमा खर्च गर्ने गरेको र यसले उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्धमा चिसोपना निम्त्याएको आरोप लगाइन् । ‘उनले आफ्नो खाना ब्लेन्डरमा पिसेर खान थालेका थिए, त्यसकारण हामी बाहिर खाना खान जान छोड्यौं । उनले आफ्नो धेरैजसो समय जिम र कारमा खर्च गर्ने भएकाले कति दिनसम्म त मैले उनलाई देख्दै देख्दिनथेँ ।’
यी दुईको सन् २०१२ मा अनलाइनमार्फत् भेट भयो । त्यसको दुई वर्षपछि उनीहरुले विवाह गरे । अब उनीहरु सम्बन्धविच्छेद गर्ने तयारीमा छन् । भ्यालेरी स्यान्डर्सका अनुसार १७ घण्टा जेलमा बिताएपछि उनीप्रति उनको माया रित्तिएको छ ।
दुई करोडको पिच भत्काएर २६ लाखको खाल्डो !
शिल्पाले कुर्थामा सुरूवाल लगाउनै बिर्सिएपछि हंगामा !
April 27, 2022 Nepali Surya